UMongameli waseUnited States ubizwa ngokuba ngumntu onamandla kunawo wonke kwihlabathi elikhululekile, kodwa amandla omthetho kaMongameli acaciswe ngokucacileyo nguMgaqo-siseko kunye nenkqubo yokuhlola kunye nezilinganiso phakathi kwamagatsha alawulayo , asemthethweni kunye namagqwetha . urhulumente.
Nangona kungumsebenzi weCongress ukuzisa nokupasa umthetho, ngumsebenzi kamongameli wokuba avumele loo mabhili okanye awanqabe.
Xa umongameli ebonisa umyalelo-mthetho , uya kusebenza ngokukhawuleza ngaphandle kokuba kukho olunye umhla osebenzayo. Kuphela iNkundla ePhakamileyo inokususa umthetho, ngokumemezela ukuba awuhambisani nomthetho.
Umongameli angaphinde akhuphe isitatimende sokutyikitya ngexesha ebonisa isibhaso. Isitatimende sokusayina komongameli singachaza nje injongo yenqila-mali, yalela i-arhente yesebe yesigqeba esinoxanduva malunga nendlela umthetho kufuneka ulawulwe ngayo okanye uvakalise uluvo lukaMongameli malunga nomgaqo-siseko womthetho.
Ukongezelela, izenzo zongameli zenze igalelo kwiindlela ezinhlanu "ezinye" uMgaqo-siseko ushintshiwe kule minyaka.
Umongameli angaphinda avume ibhilikhwe ethile, apho iNgqungquthela ingaphaya ngaphezu kwesibini kwisibini kwinani lamalungu akhoyo kwiSenethi kunye neNdlu xa kuthatyathwa ivoti elingaphezulu. Naliphi na ikamelo leNgqungquthela elivela kulo mthetho-mthetho ungayibhala kwakhona umthetho emva kweveto kwaye uyithumele umongameli ukuze avunywe.
Umongameli unesithuba sesithathu, esingenzi nto. Kule meko, izinto ezimbini zenzeka. Ukuba iCongress iseshoni nganoma yiphi na inqaku kwisithuba seentsuku zoshishino ezili-10 emva kokuba umongameli athathe umrhumo-mthetho, uya kuba ngumthetho ngokuzenzekelayo. Ukuba iCongress ayilunganga kwiintsuku ezili-10, i-bill bill iyafa kwaye iCongress ayikwazi ukuyibeka ngaphezulu.
Oku kwaziwa ngokuba yi-veto.
Olunye uhlobo lwee-veto zamandla ngolo hlobo luye lwacela, kodwa aluzange lunikezwe, lugqithiso lwe-veto . Kuthethwa njengendlela yokuthintela ukuchithwa kwezinto ezinobungozi okanye ukuchitha imali yengulube , umbandela we-veto uza kunika abaongameli igunya ukulahla kuphela amalungiselelo ahlukeneyo-izinto zeteknoloji - ekuchithweni kweebhili ngaphandle kokuvota yonke ibhajethi. Ukudumala kwabaninzi bamongameli, nangona kunjalo, iNkundla ePhakamileyo yase-United States iqhubekile iqhube umgaqo we-veto ukuba ungaphuli umthetho ongenamalungelo omthetho weCongress ukulungisa izibhengezo.
Akukho kuvunywa kweCongressal
Kukho iindlela ezimbini oomongameli abangenza ngayo amanyathelo ngaphandle kokuvunywa kwebandla. AbaPhathiswa bangakhipha isimemezelo, ngokuqhelekileyo imithendeleko kwimvelo, njengokubiza igama ngosuku lokuhlonipha umntu okanye into eye yabangela inxaxheba kuluntu lwaseMerika. Umongameli angaphinde akhuphe umyalelo olawulayo , onomthelo opheleleyo womthetho kwaye uqondiswe kumaarhente aseburhulumenteni ahlawuliswe ukuba enze umyalelo. Imizekelo ibandakanya umyalelo olawulayo kaFranklin D. Roosevelt wokubanjwa kwabafundi baseJapan baseMerika emva kokuhlaselwa kwePearl Harbor, ukuhlanganiswa kukaHarry Truman wemikhosi kunye ne- Dwight Eisenhower ukuze kuhlanganiswe izikolo zesizwe.
ICongress ayikwazi ukuvota ngokukhawuleza ukugqithisa umyalelo olawulayo ngendlela abangenza ngayo i-veto. Endaweni yoko, iCongress kufuneka idlule ibhilikhi yokukhansela okanye yokutshintsha umyalelo ngendlela abayibona ifanelekile. Umongameli uya kuthi veto yilwayo, kwaye iCongress inokuzama ukugqithisa i-veto yale bhili yesibili. INkundla ePhakamileyo inokuphinda ivakalise ukuba umyalelo olawulayo ungahambisani nomgaqo-siseko. Ukukhanselwa kwe-Congressional ye-oda yinto engavumelekanga.
I-Agenda yoMthetho kaMthetho
Kanye ngonyaka, umongameli kufuneka ukuba anikezele iNkcazo epheleleyo ngedilesi yeNyunyana yeNyunyana . Ngalesi sikhathi, umongameli uhlala ebeka i-ajenda yakhe yomthetho wonyaka ozayo, ekuchazeni izinto eziphambili kwi-Congress kunye nelizwe lonke.
Ukuze uncede ufumane i-ajenda yakhe yomthetho eyadluliselwa yiNgqungquthela, umongameli uya kucela ummeli othile ukuba axhase iibhilidi aze acele amanye amalungu ukuba atshintshe.
Amalungu omsebenzi kaMongameli , njengomphathi wongameli , intloko yakhe yabasebenzi kunye nezinye iinqununu kunye neCapitol Hill nazo ziya kucela
I-Phaedra Trethan ngumlobi ozimelayo osebenza njengomhleli wekopi ye-Camden Courier-Post. Wayesebenzela iPhiladelphia Inquirer, apho ebhala ngeencwadi, inkolo, imidlalo, umculo, iifilimu kunye neevenkile.
UChester A Arthur: UMongameli we-Twenty-First we-United States
Imfazwe Yehlabathi II: Imfazwe yaseJima
Izizathu Ezi-5 Azikho KwiNtshonalanga kwiNew "Batman v. Superman" Trailer
Izinto zokugqoka ezihlaselwe ngabantu baseSilamsi
Iphephadonga lePhethidi ye-Neon Red
Muselmann kwiinkampu zamaNazi zoNazi
Iinkcukacha Ezifutshane NgeChimborazo
Ziziphi iiZeros zomsebenzi we-Quadratic?
I-Top 5 ye-Supervative Court Court
I siseko seZoroastrianism
Iintlobo zemisebenzi kwi-Geography Field